ဒီတစ်ကြိမ်မှာရော ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို လူစုံတက်စုံ နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားနိုင်ပါ့မလား ယာဂန် ကလော့ပ်? - xyznews.co
ဒီတစ်ကြိမ်မှာရော ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို လူစုံတက်စုံ နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားနိုင်ပါ့မလား ယာဂန် ကလော့ပ်?
လီဗာပူး ဟာ ယာဂန် ကလော့ပ် ရဲ့ လက်ထက်မှာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါတိုင်း ရလာဒ်တွေ မကောင်းပဲ အရှုံးပေးထားရပါတယ်။
ပထမဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ကိဗ်ယက် က ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဆိုရင် ကစားသမား အင်အားအရရော ၊ အတွေ့အကြုံ အရပါ ရီးရဲ မက်ဒရစ်က သာလွန်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် လီဗာပူး ဟာ ပြိုင်ဘက်ကို ခွန်အားပြည့် ရင်ဆိုင် ကစားခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ အကြောင်းအရင်းကတော့ အဲဒီနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာ ဥရောပ တစ်တိုက်လုံး ကို အံ့အားသင့်သွားအောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့ မို ဆာလာ ဟာ ပွဲ အစပိုင်းမှာတင် ရာမို့စ် ရဲ့ လူချတာ ကို ခံလိုက်ရပြီး ၊ ကွင်းထဲကနေ စောစောစီးစီး နှုတ်ထွက်လိုက်ရပါတယ်။
ဆာလာ မထွက်ခင် အထိ ကစားကွက် အချိတ်အဆက်မိမိ နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ လီဗာပူး ဟာ အီဂျစ်သားကြီး ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်း စိတ်ဓါတ်ပိုင်း အရ ယိမ်းယိုင် သွားခဲ့သလို ၊ မဖြစ်သင့်တဲ့ ဂိုးတွေပါ ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အဆိုးဆုံး ကတော့ အဲဒီပွဲမှာ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး ရခဲ့တဲ့ ကာရီးယက်ဇ် ဟာ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ အမှားတွေ ဆက်တိုက် ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။
ကစားသမားတွေ အပေါ် စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ သီးခံ သုံးစွဲလေ့ရှိတယ်လို့ နာမည်ထွက်ထားတဲ့ ကလော့ပ်ကိုယ်တိုင် ကာရီးယက်ဇ် ကို လုံး၀ မသုံးတော့လို့ ၊ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘ၀ နေ့ရက်တွေ ကလဲ အဲဒီ ပွဲက စလို့ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
မနှစ်က ဘောလုံးရာသီမှာတော့ ဒီနှစ်သင်း ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတား ဖိုင်နယ် အဆင့်မှာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်တွေ့ကြပြန်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီတစ်ခါမှာလဲ လီဗာပူး ရဲ့ အဓိက နောက်ခံလူတွေ အများစု ပါဝင် ကစားပေးနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ ကာလမျိုးမို့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို မယှဉ်နိုင်ပဲ ကွာတား ဖိုင်နယ် အဆင့်နဲ့သာ ကျေနပ်လိုက်ရပါတယ်။
လာမယ့် မေလ 29 ရက်နေ့ ရောက်ရင်တော့ ကလော့ပ် နဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် တို့အကြား တတိယအကြိမ်မြောက် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံဦးမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် နောက်တစ်ကြိမ် ရင်ဆိုင် ကစားကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးဆန်းတဲ့ အချက်ကို ပြောရရင် လီဗာပူး ဟာ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလဲ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ကစားသမား စုံစုံလင်လင် နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားပြနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ တော်တော်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါပြီ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ လာလီဂါ ချန်ပီယံဆုလဲ သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လို့ လက်ကျန် အချိန်တွေမှာ လူငယ်ချာတိတ်တွေ ကို ပွဲထုတ်ရင်း ၊ အဓိက ကစားသမားတွေကို အနားပေး အားမွေးထားစေမှာ သေချာပါတယ်။
သို့သော် လီဗာပူး ကတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ရင်ဆိုင် မကစားမီ အက်ဖ်အေ ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် လက်ကျန် ဗိုလ်လုပွဲ လို့ တင်စားရလောက်တဲ့4ပွဲ ကို ကစားရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖလား4လုံး အထိ မှန်းနေတဲ့ လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ဒီ5ပွဲ စလုံးကလဲ ဗိုလ်လုပွဲတွေ ပါပဲ။
ဒီလို ပွဲကျပ်တွေ ကစားရမယ့် အနေအထားမှာ လီဗာပူး အနေနဲ့ သူတို့ ကစားသမားတွေ ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ကို ဘယ်လောက်အထိ ထိန်းထားနိုင်မလဲ ဆိုတာ မေးချင်စရာ ကောင်းတဲ့ မေးခွန်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တာတွေ ၊ ကစားသမားတွေ ရဲ့ ဆုဖလား မျှော်လင့်ချက် ဖိအားတွေကြောင့် ဒဏ်ရာပြသနာတွေ ဆိုတာ အချိန်မရွေး ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီး စိုးရိမ်ချင်စရာ အကောင်းဆုံး က လီဗာပူး ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီပိတ် ပွဲစဉ် ဝုဖ် နဲ့ ကစားပြီးတာ နဲ့6ရက်ပဲ နားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကြီးကို ဆက်တိုက် ကစားရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ယာဂန် ကလော့ပ်ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို သူ့ရဲ့ အတောင့်တင်းဆုံး လူစားရင်းနဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ချင်စရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်လုပွဲ တုန်းက နာကျင်မှုတွေ နဲ့ ကွင်းထဲကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ မို ဆာလာ ကတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အပေါ်ကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ၊ မပြီးစီးသေးတဲ့ စာရင်းတွေ ရှင်းစရာ ရှိသေးတယ်လို့ အရိပ်ယောင် ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ရီးရဲ မက်ဒရစ်ကလဲ မန်စီးတီး ကို အနိုင်ယူတဲ့ ပွဲအပြီး “A por la 14” လို့ စာတန်းရေးထိုးထားတဲ့ ဂျာစီတွေ ဝတ်ဆင်ကာ အောင်ပွဲခံပြခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် က “All out for number 14” လို့ ရပြီး ၊ လီဗာပူး ကို စိတ်ဓါတ်ရေးရာ စတင် ဆင်နွှဲလိုက်တာပါ။
သေချာတာ တစ်ခုက ပဲရစ် က ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲဟာ ပရိသတ်တွေ အတွက် အခိုက်အတန့်တိုင်း ရင်ခုန်ချင်စရာ ကောင်းတဲ့ ရသမျိုးတွေကိုပဲ ပေးစွမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ရီးရဲ မက်ဒရစ် က ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီး ၊ ချဲဆီး တို့ကို အနိုင်ယူပြခဲ့သလို ၊ လီဗာပူး ကလဲ လာလီဂါ ကလပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အေတီကို ၊ ဗီလာ ရီးရဲ တို့ကို အနိုင်ယူပြခဲ့ပါတယ်။
4 ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ကလော့ပ်က အသာစီးရယူသွားမလား ၊5ကြိမ်မြောက် တက်လှမ်းလာတဲ့ အန်ဆယ်လော့တီ ကပဲ အသာစီး ယူသွားမလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ……
Previous Article ကျွန်တော် ဘောလုံးအကြောင်းကို နားတောင်မလည်နိုင်တော့ပါဘူး’ ရီးရဲယ်တို့ ဖိုင်နယ်တက်သွားခဲ့တဲ့ အပေါ် အံ့အားသင့်နေတဲ့ ရှမိုက်ကယ်
Next Article အမေ့လျော့ခံ ကစားသမား ဖြစ်နေသူ တစ်ဦးဟာ ဘာကို လိုအပ်နေသလဲဆိုတာ တန်ဟတ်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂျပ်စတမ်း